Sidee loo sameeyaa shaashad sawir leh sawirrada Instagram? | Abuurista khadka tooska ah
Badanaa dadku way isticmaalaan Instagram si loo soo bandhigo sawirro cuntada cajiibka ah ee aad udgoonayso, ku muuji maqaarkaaga quruxda badan xeebta, la wadaag sawirada safar aad u xiiso badan ama sawir kale oo aad rabto inaad ku wadaagto shabakadan bulshada.
Laakiin si kastaba ha noqotee, sawirada Instagram waxaan u isticmaali karnaa waxyaabo badan oo dheeri ah, adoo adeegsanaya aaladaha ku haboon si aad ugu rogi karto sawiradan cajiibka ah wax asal ahaan iyo dabeecad ahaanba aad uga fog, kana fog dalabka mobilkaaga.
Sidee loo sameeyaa sawir-gacmeed sawir leh Instagram?
Laba siyaabood oo aan ku xusi karno si aan ugu siino adeeggan asalka ah sawirradaada Instagram, waa iyaga oo u adeegsanaya fikradaha hal abuurka leh shakhsiyad badan, tusaale ahaan, waxaan ku abuuri karnaa gidaar ama darbi iyaga la mid ah, ama kombiyuutarkaaga, kaniiniga ama sidoo kale mobilkaaga ama haddii kale waxaan u adeegsan karnaa shaashadda kombiyuutarka.
Haddii aad jeceshahay inaad ku darto taabasho shaqsiyeed waxyaabahaaga, tani waxay noqon kartaa fikrad aad u fiican, waa sababta maqaalkan aan ugu tusinayno sida loo sameeyo ilaaliyaha shaashadda ama a wallpaper oo leh sawirro Instagram ah iyo qaab aad u fudud, markaa fiiro gaar ah u yeelo.
Markaad samaynayso a gidaarka ama kumbuyuutarkaaga ama mobilkaaga, haddii aad doorbideyso waxaad isticmaali kartaa ikhtiyaarka aad u adeegsan karto tifaftiraha sawirka ama waxaad ku sameyn kartaa gacanta. In kasta oo dabcan ay fududahay oo dhakhso badan tahay in la isticmaalo qalab hawshan kuu qabta, sida ku riix waana iyada oo websaydhkan aan ka heli karno qashinkeena hawlo kala duwan oo khadka tooska ah ah kaas oo aan ku siin karno koronto aad u qurux badan sawirradayada 'Instagram'.
Tusaale ahaan, waan abuuri karnaa ama ku dhex dari karnaa barxadaha 'Instagram' boggeena, waxaan u sameysan karnaa sawirro Facebook-ga ah ama sidoo kale waan sameyn karnaa u sameyso sawir darbi ah Twitter-ka. Laakiin dhinaca kale, markan waxaan diiradda saari doonnaa oo keliya qalabka loo sameeyo sawir-gacmeedka.
Waa inaan si fudud u galnaa, shabakada ayaa ogaan doonta cabirka shaashada waxayna noo ogolaaneysaa inaan leenahay a Horudhac natiijada aan rabno, laakiin sidoo kale waxay leedahay menu hoos-hoosaadyo ah oo ikhtiyaarrada cabbirka shaashadda kale u muuqdaan, haddii aan u sameyneyno gidaarrada qalab kale.
Waan kala dooran karnaa saddex nooc oo kolaj ah oo u habee midabka asalka. Dhanka kale, waxaan heli karnaa ikhtiyaarka aan ku kala dooran karno midka ugu dhow ama midka ugu da'da weyn haddii aanan jeclayn xulashada sawirrada aan dooranay, waxaan riixi karnaa badhanka "isku shaandhee sawirada”, Ilaa aan ka helno mid aan aad u jecel nahay. Markaan dooranay xulkeenna, waxaan gujinnaa badhanka "Abuur hadda”Codsiguna wuxuu abuuri doonaa sawir aan ku soo dejisan karno kumbuyuutarka.
Waqtigaan, iyo guud ahaan, isticmaalka ilaaliyaha shaashadda micno badan ma sameynayo, marka laga reebo aan u isticmaalno kaliya bilicsanaanta fudud. Laakiin haddii aad ka mid tahay dadka weli doorbidaya inay adeegsadaan sawirro muuqaal ah oo si aan kala sooc lahayn ugu beddelaya shaashaddaada iyadoo aan la isticmaalin kombiyuutarka, waxaa jira qaab aad u fudud oo loo adeegsado sawirradaada Instagram tan.
Si aad u awood ugu yeelato inaad ku sameysato sawir-gacmeedkeena sawirro Instagram ah, marka hore waa inaan galno DropBox oo aan abuurey gal cusub sawirradan, oo leh magaca aan aad u jecel nahay.
Ka dib markii aan tan helno, waxaan ku abuureynaa IFTTT raashin badbaadin kara mid kasta oo ka mid ah sawirrada cusub ee aan ku soo dhejinno astaanta galka aan hadda abuurnay ugu dambeyntiina, waxaan xulashada qaabeynta shaashadda kombuyuutarka. Windows iyo Mac waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay noo ogolaadaan inaan u isticmaalno sawirada aan ku keydinay galka ku jira darawalka adag shaashad ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » Sida loo sameeyo shaashad shaashad ama gidaar leh sawirro Instagram ah?